Yiyiphi ithemba lomgcini we-ITIL Certification - ITS Tech School
I-ITIL isatifikethi sele ithatyathwe ngokugqithiseleyo phakathi kweengcali zezobugcisa njengexesha elide. Le nyaniso ihlanganiswe emva koko, ngokuqwalasela ukubandakanywa kwe-ITIL phakathi kwe-15 yokufumana izatifikethi eziphezulu kakhulu kwi-planethi ngonyaka we-2014. Isizathu esenza ukuba iingcali ze-ITIL eziqinisekisiwe ziphephe ngaphezu kwabameli abahlukeneyo okanye abafunayo umsebenzi ukuba i-ITIL yolawulo iyadingeka kwiinkalo ezininzi ezinxulumene nezoshishino ze-IT. Ngaloo ndlela, iingcali ze-ITIL zifumana abasebenzi abahlawula ngokucebile kunoma yimuphi umbutho we-IT ngokufanelekileyo ngempumelelo.
Ukungayithobeli umgangatho ongenakunakwenzeka weenkqubo ze-ITIL, abalandeli abanomnqweno baneenkcukacha ezinokuthobeka kwemibuzo malunga nokuvuleka kwemisebenzi ekhoyo phambi kwekhosi. Eli nqaku elincinci liya kunceda i-peruser yenze umboniso jikelele ngokubhekiselele kwindawo ekhoyo yemarike yengqesho yeengcali ze-ITIL eziqinisekisiweyo.
Ngokuqhelekileyo, iinkqubo ze-ITIL zixhunyiwe kwintsimi yoLawulo lweNkonzo. Iindawo eziqhelekileyo ezilindelekileyo emva kokufezekiswa kwe-ITIL ukuqinisekiswa yizo ze-Analyst Agent, uMququzeleli woTshintsho, uMhlalutyi weNgxaki, njalo njalo.
Icandelo le-ITIL kwi-Software Engineering
Ithemba leNkcazo yeMisebenzi yee-ITIL eziQinisekisiweyo
Iimimandla ezimbini ezibalulekileyo kwi-software ziphuculwe kwaye zigcinwe. Nangona ukuqhubela phambili kwesoftware kuqhuba ukwakhiwa kwezicelo ezintsha ngaphakathi kwesabelo sabelo esabelwe ngokusebenzisa ulawulo lwezentengiso, ukuxhaswa kwesoftware kunenkxalabo kunye nokuphathwa kunye nokugcinwa kwezenzo xa isicelo siphelile kwaye sisebenza. I-ITIL inendima ebalulekileyo yokudlala kwisilondolozi sesofthiwe.
Nawuphi na umntu kwisilondolozi se-software, inkxaso ye-IT, isakhelo okanye ulawulo luza kubonisa ukuphunyezwa okuphuculweyo kunye nokuqinisekiswa kwe-ITIL.
Ukuthabatha izitifiketi ze-ITIL kungafezekiswa kwiimvavanyo ze-ITIL.
ITIL Foundation: Oku kuqinisekisa iimvavanyo eziphambili zemigangatho ebalulekileyo, iifom, iinxalenye, amandla, iingcamango, imiqathango, njalo njalo.
ITIL phakathi: Olu vavanyo lwenza amanyathelo abafaki-sicelo ukuba baphumelele ngokupasa ulawulo.
UkuPhatha kwi-Lifecycle: Olu vavanyo luya kunciphisa amandla okutshabalalisa nokudibanisa izinto ngokucinga.
ITIL Ingcali: Ezi ziqinisekiso eziqinisekisiweyo zobugcisa bakho, oko kukuthi, kwi-ITIL system.
ITIL Masters: Le ngongoma enkulu ye-ITIL ukuqinisekiswa, kwaye ifunyanwa ngabantu abali-35 abavela kuyo yonke indawo kwihlabathi lonke.
Kwinqanaba leemarike zengqesho, nolu luhlu lwemisebenzi omele uyihlolisise ngokubhekiselele kumava akho wengcali-
Level Beginner(0 kwi-7 iminyaka yamava):
Ekuqaleni ekubizeni ulawulo lwe-IT, umzekelo, IBM Tivoli kunye ne-BMC Remedy.
ImiSebenzi enxulumene nesiseko se-IT kwi-MNC.
I-IT iyomeleza ukwakha, umxhasi wokuthunyelwa kweenzuzo, ukuncedisa indawo yokusebenzela, ukuxhaswa okukhethekileyo, njalonjalo.
Nqanaba eliphakathi(Ngaphezulu kweminyaka eyi-7 yamava):
Imisebenzi ethembekileyo, yokuphatha njengale:
Isiqendu okanye uMphathi weNgxaki
Umphathi weDiski yeeNcedo
Ukufunda okunzulu kwesiseko kuzisa iinxalenye, umzekelo,
I-Consulting yamahhala e-ITIL
Qaphela ukuba ngelixa ufanelekile ukubonisa i-ITIL, kwaye ungayidlulisa, ngokuzimeleyo kwisiseko sakho sobuchule, kunokungabi namandla okufikelela kumathuba okuvula umsebenzi ukuba ungenalo isiseko se-IT . Kucinga ukuba, nakunoma kunjalo, uceba ukufezekisa okanye njengamanje unomsebenzi kwinkqubo yokulondoloza nokulawula, oku kukuqinisekiswa okufanelekileyo kuwe.
Innovative Technology Solutions (ITS Training) ikunika ukuba uthathe iikholeji ze-ITIL kunye neemviwoITIL Uqeqesho kwiGurgaon